XOG: Siciid Deni, Axmed Madoobe & Siyaasiin kale oo Imaaraatka Carabta iskugu yeeray. -News and information about Somalia
Home Warkii XOG: Siciid Deni, Axmed Madoobe & Siyaasiin kale oo Imaaraatka Carabta iskugu...
XOG: Siciid Deni, Axmed Madoobe & Siyaasiin kale oo Imaaraatka Carabta iskugu yeeray.
Warsidaha Warkii Online wuxuu ogaaday in dawladda Imaaraatka Carabta ay hadda bilowday in ay iskugu yeerto siyaasiinta taageersan siyaasadeeda ku wajahan arrimaha gudaha ee Soomaaliya, kuwaas oo ay horboodayaan Hoggaamiyaasha dawlad gobaleedyada Jubbaland & Puntland, waxaana sidaas oo kale xubno ka ah qaar kamid ah xubnaha sida ba’an u mucaarada dawladda Faderaalka ee hadda jirta.
Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa horey u gaaray Imaaraatka Carabta, balse maalmo kooban oo uu ka maqnaa dib ayuu ugu soo laabtay safar caafimaad oo uu ku aaday dalalka Yurub mid kamid ah, waxaana hadda uu kusugan yahay dalkaas.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo maalmihii lasoo dhaafay kusugnaa dalka Kenya ayaa u socdaalay dalka Imaaraatka Carabta, isagoo safarkiisu ahaa mid qarsoodi ah, waxaana uu halkaas u tagayaa latashiga Imaaraatka.
Sidaas oo kale siyaasiin ay ka mid yihiin Madaxda Xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliya ayaa usocdaalaya dalka Imaaraatka Carabta, qaarkood waxay sheegeen in ay qeyb ka noqonayaan munaasabada 48 sanno guurad kasoo wareegtay markii ay midoobeen dawlad gobaleedyada Imaaraatka Carabta.
Laakiin, xogta la helay waxay cadeynaysaa in ay xubnahan ka qeybgalayaan latashi siyaasadeed ay dawladda Imaaraatka Carabtu ugu yeertay dhinacyada ay taageerto ee kusugan gudaha dalka Soomaaliya.
Xogtu waxay sheegaysaa in ay dhinacyadu ka wada hadli doonaan qorshaha doorashooyinka 2021-ka oo kusoo wajahan Soomaaliya, taas oo ay Imaaraatku doonayso in ay saameyn ku yeelato cida noqonaysa Madaxweynaha Jamhuuriyada Faderaaliga ah.
Imaaraatku waxay ku jabtay labadii doorasho ee u dambeysay dalka, waxayna la kulantay wax aysan fileynin, ilaa uu xumaaday xariirka kala dhaxeeya dawladda Faderaalka Soomaaliya, bishii July 2017-kii ayay ahayd markii uu xumaaday labada dal.
Puntland & Jubbaland ayay joogitaan rasmi ah ku leeyihiin Imaaraatka Carabtu, si gaar ah waxay hadda saameyn ugu leeyihiin Puntland oo ay gacanta ku hayaan ciidamo gaaraya ku dhawaad 5000 Askari, Dekeda, Garoonka diyaaradaha iyo goobo cusub oo lagu wareejin doono.
Previous articleKulankii Aqalka sare oo baaqday
Next articleAwooddii Axmed Madoobe ee J/land oo hoos u dhacday & Khal khal ka jira Kismaayo
Hadalkii SHEEKH SHARIIF oo saameyn ku yeeshay shaqadii ciidamada DF
Jaamacadda Carabta oo soo dhowaysay heshiiskii Somalia & Kenya